Wilkie Collins. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Mabhuku makuru | Zvazvino Zvinyorwa
Wilkie Collins. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Mabhuku makuru
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela
Wilkie collins ndomumwe wevanyori veVictorian vanyori uye akaberekwa zuva rakaita sezuva ra 1824 en London. Yakabudirira kwazvo munguva yayo, yaive mutangiri wenhau yetikitivha uye chakavanzika. Shamwari yepedyo yaCharles Dickens, pamwe chete vakaburitsawo mamwe mabhuku. Nhasi mukurangarira kwake ndinorangarira mabasa ake ane mukurumbira senge Dombo remwedzi o Mukadzi akapfeka zvichena pakati pevamwe
1 Wilkie collins
2 Mamwe mabhuku
2.1 Dombo remwedzi
2.2 Mukadzi akapfeka zvichena
2.3 Iyo mask yakabiwa
2.4 Murume akapfeka nhema
3.1 Icy kudzika
3.2 Mugumo wakafa
William Wilkie Collins aive mwanakomana waHarriet Geddes uye nemupendi William Collins. Zvaiita kunge zvakanangana neunyanzvi pakutanga uye akadzidza kupenda muhudiki hwake. Gare gare akafunga Mutemo, asi haana kumboita mutemo uye akazvipira zvizere kuna literatura.
Akaburitsa nyaya dzake muzvikamu, sevanyori vazhinji panguva iyoyo, uye inozivikanwa zvakanyanya nekuve iyo mutangiri webhuku redikitivha kuUK. With Charles Dickens, iyo yaive shamwari huru uye naiye waakarondedzera naye nekuroora kwemukoma wake nemwanasikana waDickens, akanyora mashoma emanoveli uye anotamba ari tandem. Izvi ndizvo zvezvimwe zvinorangarirwa zvikuru.
Inofungidzirwa a hunyanzvi, ndizvo chinonyanya kuzivikanwa, kunyanya kune yayo nzira yekurondedzera iyo inotipa isu neakateedzana hzvisingazivikanwe chokwadi kubva kunzvimbo dzakasiyana kwazvo dzekuona yehunhu hwake.
Un ngoda inokosha iyo inoshandura ruvara, dombo reMwedzi, rakabiwa yemufananidzo wemwari wechiHindu na chirungu officer zvisinei nekutuka kuri mariri. Makore mashoma gare gare, muzukuru wake, mukadzi akapfuma, kugara nhaka yezuva rake rekuzvarwa. Asi anavo maHindu matatu anoda kumuwanazve nekumuona sedombo dzvene. Kuburikidza neimwe yetsananguro dzinoitwa nechapupu chega chezvaakaona nekunzwa mazuva iwayo, iye achafanirwa kuburitsa skein yemurume kesi inoita kunge isinga gadzirike.
Mukadzi akapfeka zvichena
Imwe nganonyorwa izere nezvakavanzika zvinotaurira nyaya ye wechidiki wekudhirowa mudzidzisi, Walter Hartright. Hightight husiku inowanikwa munzira ine mukadzi asinganzwisisike akapfeka zvichena, uye usafunge kuti urikutanga a kunakidzwa nemhedzisiro isingafanoonekwi. Icho chiitiko chinotanga nekuchinjisa kwako kuenda kuimba yemahombekombe kuNorth West mhenderekedzo yeEngland kuenda kuraira hanzvadzi mbiri. Ikoko achawana rudo mune rimwe rawo uye a kunyengera izvo zvicharondedzerwa nevateveri vayo.
Iyo mask yakabiwa
Iri basa tevera mukumuka kwekubudirira uyo aive neyeshamwari yake Dickens na Krisimasi nhau. Nekudaro, Collins akaburitsa muna Zvita zvakare se nyaya, asi kunyanya uye zvakasiyana, nekubata kwayo kwechakavanzika uye kusanzwisisika.
Iye protagonist ndiye Reuben Wray, mutambi akarega basa yezviitiko uye anonyanya kufarira mabasa eShakespeare. Achisvika nemhuri yake mumusha mutsva muTidbury-on-the-Marsh, Reuben anodhonzera kutarisisa kwevamwe vavakidzani vake nekuunza safe izvo zvavanowana zvakavanzika pasi penguvo yake. Saka ivo vanofungidzira kuti Wray nemhuri yake vakapfuma, kunyangwe bhokisi riine chete "chifukidzo chakabiwa", plaster replica yeiyo shakespeare bust inowanikwa mukereke yeStratford-upon-Avon uye yakakosha zvakanyanya kumuridzi wayo kupfuura chero hupfumi hwenyika. Asi pane zvakawanda zvakavanzika kuseri kwemask.
Murume akapfeka nhema
Zvakare nehunyanzvi hwevanyori vakasiyana, tsamba uye madhiri, Wilkie Collins anotipinza munyaya ine akabata abbey, UN zvinonyadzisa zvakapfuura, UN muchato wekunyepera uye nhaka inopokana. Uye ndezvekuti mushure me chiitiko chine njodzi izvo zvinomutambudza, protagonist, Lewis romayne, anozvivharira mumba make yenyika, kure neLondon nzanga yepamusoro. Asi vakanaka uye vakangwara Stella ndichaenda ku kumununura yekuvharirwa kwake kwekuzvidira. Zvichakadaro, baba vanoroya benwell ane chinzvimbo urongwa kutora a yekare abbey inowanikwa panzvimbo yeRomayne, kunyangwe kana uchifanira uya pakati pamajaya maviri.
Akave nemimba pakutanga Chemhondoro chidimbu chinoshamisa, asi yakaguma yave novel. Ivo protagonists, Clara Burham naFrank Alderley, Vanosangana pakutamba kukuru uye Clara achawa zvakanyanya murudo naye. Asi uchaitsanangurira sei Richard Wardour, mukwasha wake, uyo achangodzoka kubva kuIndia kuzomupfimba. Uye chii chichaitwa naWardour kusangana naAlderley. Kurwisana uye kunyengera kunoshandiswa.
Uyu kunyengera rungano uye zvemashiripiti ngano panguva imwechete iyo yakatanga kunyorwa naCollins naDickens. Unganidza iyo zvisikwa zvevanyori vaviri uye edza kuti sei la vida hupenyu hwezuva nezuva hwamuzvinabhizimusi zvinova zvakaoma pakarepo. Zvakaoma vimbiso yakaitwa kushamwari, iyo kutengesa yemumwe munhu waunovimba naye uye chido Kana ivo vakakodzera kune vadikanwa vavo, vanozoshandura hupenyu hwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Wilkie Collins. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Mabhuku makuru
Hupenyu nebasa raMiguel Hernández
Iyo nyonganiso yaunosiya naCarlos Montero